IME ỌMỤGWỌ | Igboniile
Wed, 11/26/2014 - 16:03 | Site Manager
Mazi Eze Emmanuel Mary Okigwe
Rich. N. Ekegbo; richploughman@yahoo.com [Onye Ndezi]
N’ala Igbo, ọ na-abụ nwoke lụọ nwanyị maọbụ nwaanyị lụọ dị, ihe ọzọ a ga-amalite tụwa anya ya bụ ịmụta nwa. Ọ bụrụ na nwanyị atụghị ime were mụta nwa, obi anaghị adị nwanyị ahụ na dị ya mma. Mana oge ọ bụla nwanyị nọ na dị tụrụ ime, ọ na-abụ ihe ọ]ụ. A na-enye Chukwu ekele maka ya, ma na arịọkwa Chukwu ka O mee ka nwanyị ahụ mụọ nwa n’udo na ọ]ụ. Mgbe ọ bụla nwanyị dị ime, ma di ya ma ndị mụ nwanyị ahụ na-akwado maka ọ mụmụ nwa nke nwanyị ahụ. Ọ bụrụ na nwanyị ahụ mụọ nwa n’udo, ọ na-abụ ihe nnukwu a]ụrị n’etiti ndị maara ya; ma ikwu ya ma ibe ya ndị nụrụ na ọ mụọla nwa. A]ụrị na-egbukwa nwoke nwunye ya mụrụ nwa ka mmanya, n’ihi na, n’ala Igbo, o nweghi ihe karịrị nwa. Onye Igbo ọ bụla kwetara na mbọ niile ọ na-agba n’ụwa bụ maka nwa ya maọbụ ụmụ ya.
Ọ bụrụ na nwanyị mụtuo nwa, a na-eji ọ]ụ anabata nwa ọhụrụ ahụ ma na-ekelekwa nne mụrụ nwa . A na-amalitekwa ile nwanyị mụrụ nwa ọhụrụ ọmụgwọ. Ọ bụrụ na nwanyị mụọ nwa, di nwanyị, mụrụ nwa na-ezigara ndị be nwunye ya (ndị ọgọ ya) ozi na nwa ha amụọla nwa. Obodo ụfọdụ n’ala Igbo anaghị ezi ya n’ọnụ nkịtị. Ha na-eji ihe dị ka mmanya, ọjị na-ezi ya bụ ozi.
Ụfọdụ obodo na-ejikwa mba ji gbara agba were na-ezigara ndị be nwunye yo ozi na ada ha nwanyị a mụọla nwa. Ọ bụrụ na e zigachaa ozi, nne onye ahụ mụrụ nwa na-aga ozigbo ịhụta nwa ya na nwa ọhụrụ a mụrụ. O ruo na be nwa ya ahụ mụrụ nwa, ihe ọ ga anọnyere ya bụ otu izu; ya bụ mkpụrụ ụbọchị anọ ọ nọzuo mkpụrụ ụbọchị anọ, ọ lọta were kwadoo maka ije lee nwa ya ọmụgwọ. Nwanyị na-aga ile nwa ya ọmụgwọ anaghị agba aka aga. Tupu ọ gawa ile ọmụgwọ, ọ ga-akwado onwe ya nke ọma site n’ibu ihe dịka ihe ndị a: mmanụ, azụ, abacha, ogiri, ose, okporoko na ihe ndị ọzọ e ji esi ihe, nakwa ihe oriri ndị ọzọ aka ya ruru were gaa na nke nwa ya mụrụ nwa ọ ga-ele ọmụgwọ.
Ọ bụ nwanyị bịara ile nwa ya ọmụgwọ ka ọ dịịrị ileta nwa ya mụrụ nwa ọhụrụ anya nke ọma. Ọ bụ ya ga na-esi ihe nwa ya ga na-eri. Nwanyị ahụ mụrụ nwa agaghịkwa aba n’usekwu tutu o si n’ọmụgwọ pụta. Ọ bụkwa nwanyị na-ele nwa ya ọmụgwọ ka ọ d,[r[ [wx nwa ahx a mxrx qhxrx ahx, q ga na-awụkwazị nwa ya nwanyị mụrụ nwa ahụ site n’ịdị na-abịa ya mmiri ọkụ n’afọ kwa mgbe kwa mgbe. Nwanyị na-ele nwa ya ọmụgwọ na-ahụkwa na nwa ya na-a]ụ mmiri ọkụ, na-eri ji awai e siri nke ọma nakwa nri e ji ose na ụzịza were si. A na-eme nke a iji were hụ na nwanyị mụrụ nwa na-adị ike mgbe ọ bụla. Ọ bụkwa ọrx dịịrị nwanyị na-ele nwa ya ọmụgwọ ịhụ na akwa nwa ọhụrụ ahụ niile, ndị nke nwa na nwanyị ọ na-ele ọmụgwọ, nọ ụlọ ebe na bi na-adị ọcha mgbe niile.
Nri anaghị akọ n’ụlọ ebe a na-ele nwanyị ọmụgwọ, ọkụ anaghị akọ n’usekwu ma ncha, maka na a ga na-esi na-ahọtu. A ga na-eri nri kwa mgbe kwa mgbe. Nwoke na-alụ nwanyị ahụ mụrụ nwa ọhụrụ agaghịkwa ekwe ka o nwee ụdị ihe oriri a chọrọ achọ.
N’ezie ọ na-abụ nnukwu ihe ihere n’ala Igbo ma ọ bụrụ na nwoke elenwughi nwunye ya ọmụgwọ. Ọ bụkwa n’oge ọmụgwọ ka e ji amata nwoke zuru onwe ya n’ihi na ọ bụ mgbe ahụ ka ihe dị n’ụlọ ji apụta n’ezi. Oge ọmụgwọ bụ oge nwanyị mụrụ nwa ji ezu ike nwa ọ mụrụ ma na-erikwa ihe ọ bụla ọ chọrọ iri n’ihi na ọ na-abụ dike jechaa ọgụ lọta, a naa ya aka. Nwanyị mụrụ nwa ọhụrụ si ọgụ ya na ndị mmụọ lụrụ lọta n’udo n’ihi na ndị Igbo sị na nwanyị dị ime na ndị mmụọ ji okwu. Nwanyị nọ na ọmụgwọ anaghị eje ozi ọ bụla, ọ naghịkwa echu mmiri maọbụ jee nku. Ọ naghị apụ apụ. Ọ naghịkwa aga ahịa. Ọ bụ onye na-ele ya ọmụgwọ ka ọ dịịrị ịhụ maka ihe ndị a. Nwanyị nọ na ọmụgwọ na-anọcha n’ọmụgwọ tupu o mewe ihe ndị ahụ.
Ọ bụ eziokwu na ọ bụ nne nwanyị mụrụ nwa ọhụrụ na-ele nwa ya ọmụgwọ, mana ọ bụrụ na nne onye ahụ anọghịzị, nwanne nne ya na-abịa lee ya qmụgwọ. Ọ bụrụkwanụ na nwanne nne ya abịaghị, onye tọrọ ya na nwanyị ab[a. Ihe kpatara nne mmadụ ji eje ele nwa ya ọmụgwọ bụ na ọ bụ otu n’ime ụzọ ndị nne si eri ulu n’aka nwa ha. Ọzọkwa dịka ibe ya, bụ na nwanyị ka onye ọ bụla wee mara nwa ọ mụrụ ma karakwa mara ụzọ ha abụọ ga-esi nọrọ n’enweghi esemokwu ọ bụla. Nne ịga ọmụgwọ na-abụkwazị ihe ugwu n’ebe nne nọ. Ọzọ dị ka ibe ya bụ na nne na nwa ya nwanyị na-aka aghọta onwe ha, ma karakwa mara okpuru onwe ha kar[a ndị ọzọ.
Ihe a na-anọ ọmụgwọ n’ala Igbo bụ IZU ASSA, ya bu otu ọnwa Igbo. N’ime izu assa ahụ ka a na-ebe nwa ahụ amụrụ ọhụrụ ugwu ma ọ bụrụ nwa nwoke. N’ihi na ọ bụ o mee izu abụọ, ya bụ mkpụrụ ụbọchị asatọ, ka e ji ebi nwa ugwu.
Nwanyị na-ele nwa ya ọmụgwọ na-anọkwa ya mgbe ahụ. Ọ bụrụ na nwanyị bịara ile ọmụgwọ nọzuru izu asaa, di nke nwanyị mụrụ nwa ga-edu ọgọ ya nwanyị bịara lee nwunye ya ọmụgwọ tupu nwany[ ahụ alaa, nwoke ọ bịara be ya ga-azụ tara ya ọtụtụ ihe ọ ga-eji lakwurukwa ndị be ya. Mana nwoke na-eme ka aka ruru ya. Ihe ndị a na-azụta were bunye nwanyị lechara nwa ya ọmụgwọ were na-ala gụnyere ọgọdọ (ukwu akwa), akpa nnu, osikapa, agwa,mmanụ, achịcha bekee, pawụda, ncha, azụ, okporoko, nakwa ihe ndị ọzọ ga . Ọ bụ eziokwu na nwoke ga-edu ọgọ ya nwanyị ụlọ, mana ọ bụghịkwa na nwoke ga-azụta ihe karịa otu akpa ga ha.
Ọ bụrụ na nwanyị gara lee nwa ya ọmụgwọ larute be ya, ndị mmadụ na-abịa na-ekele ya ma na-ekirikwa ihe ndị o jiri lọta ọmụgwọ ọ gara. Nwanyị ahụ ga na-eke ha achịcha bekee ahụ e jiri lọta, ma na-amanyekwa ha nnu site na-akpa nnu ọ bụ were lọta n’ ihi na ihe nwa abụghị otu onye na-eri ya.
Anyị ga-amatakwa na tupu e duo nwanyị b[ara le ọmụgwọ ụlọ, ya na onye o lere ọmụgwọ ga-azụ ahịa ọmxgwq. Nke q bx ime emume na-egosi na e lere qmxgwq anqzuola izu asaa n’qmụgwọ. Ọ ga-ekwu ụbọchị ọ ga-azụ ahịa ọmụgwọ. Ụbọchị ahụ, ọ ga-akwado onwe ya nke ọma, dozie onwe ya. Ọ pụta, ndị mmadụ na-ekele ya, na-atụrụ ya ego. Ọ bụkwa site n’ahịa ọmụgwọ ka o ji egosi na ya amalitela ime ihe ndị ahụ ọ naghị eme mgbe ọ nọ n’ọmụgwọụ. Nwoke e lere nwunye ya ọmụgwọ na-enyekwa ọgọ ya nwanyị ego akpa ma ọ bụrụ nwoke nwere.
N’ezie, ọmụgwọ na-enye aka n ileru nwata anya nke ọma ma a mụọ ya, ma lerukwa nne mụrụ ya bụ nwa anya. Mana mgbe ụfọdụ ihe isi ike na-anapụ nwanyị ịnọ ọmụgwọ otu o kwesiri nọ, n’ihi na ọ bụ ihe dịrị ọkụkọ mma, ọ tụchaọa onwe ya.